Kule manani kukho imigaqo emininzi eyahlukileyo phakathi kwabo. Omnye umzekelo wolu phawu phakathi kobuninzi kunye namaxesha athile . Nangona kukho izinto ezininzi ezisetyenziselwa iziganeko ezihambelanayo, enye ingakumbi iquka i-histogram yesiqhelo. Olu luhlobo lwegrafu oludibanisa nezinye izihloko kwiimanani zamanani kunye nezibalo.
Ii-Histograms ziyi-grafu zezibalo ezibukeka njengebar grafu .
Ngokuqhelekileyo, nangona kunjalo, i-termtogram yegama lakhe igcinelwe ukuguquguquka kwamanani. I-axtographic axis ye-histogram yimiqolo yenombolo equkethe iiklasi okanye amabhondi obude obufanayo. Ezi zibheko zikhethiweyo kumgca wembalo apho idilesi ingawa khona, kwaye ingaba nenombolo enye (ngokuqhelekileyo kwiiseti zedatha ezichanekileyo) okanye uluhlu lwexabiso (ukwenzela iiseti zeenkcukacha ezinkulu kunye nedatha eqhubekayo ).
Ngokomzekelo, sinokuthi sinomdla ekuqwalaseleni ukuhanjiswa kwamanqaku kwiimbuzo ze-50 zeklasi kwiklasi labafundi. Enye indlela enokwenzeka yokwakha iibhokhwe yayiza kuba nebhadi eyahlukileyo kwiindawo ezili-10.
I-axis ecacileyo ye-histogram ibonisa inani okanye ubukhulu bokuba ixabiso lwedatha livela nganye kwiibhokhwe. Iphakamileyo ibha, ixabiso lwedatha liwela kuloluhlu lweebhanki. Ukubuyela kumzekelo wethu, ukuba ngaba kukho abafundi abahlanu abafumana amanqaku angaphezu kwama-40 kwimibuzo, ngoko ibha ehambelana ne-40 ukuya ku-50 ibin iya kuba ngamaqumrhu amahlanu aphezulu.
Uhlobo lwakhe lweFoto
I-histogram yexesha eliqhelekileyo yintshintsho encinci ye-histogram yexesha eliqhelekileyo. Esikhundleni sokusebenzisa i-axis ye-vertical kubalo beempawu zedata eziwela kwibhodini elinikeziweyo, sisebenzisa le ngqangi ukumela inani elipheleleyo lexabiso leenkcukacha eziwela kule bin.
Ukususela kwi-100% = 1, yonke imivalo kufuneka ibe nokuphakama ukusuka ku-0 ukuya kwe-1. Ngaphezu koko, iindawo eziphakamileyo zazo zonke imivalo kwi-histogram yexesha eliqhelekileyo kufuneka zibalekele kwi-1.
Ngaloo ndlela, kumzekelo osebenzayo esibukeleyo, cinga ukuba kukho abafundi abangama-25 eklasini kunye neyesihlanu baye bafumana amanqaku angaphezulu kwama-40. Esikhundleni sokwakha ibha yokuphakama kwemihlanu kule bin, siza kuba ne-bar yokuphakama 5/25 = 0.2.
Ukuthelekisa i-histogram kwi-histogram yesiqhelo, ngasinye sinamabhinqa afanayo, siya kuqaphela into ethile. Ubume obubanzi beemplogram zakhe ziya kufana. I-histogram yesiqhelo esingaqhelekanga ayigxininisi kubalo kubalo nganye. Esikhundleni salolu hlobo lwesigrafu kugxininisa indlela inani lamanani eenkcukacha kwi-bin lihambelana nezinye iibhokhwe. Indlela ebonisa ngayo olu lwalamano lubangelwa ngamaphesenti ewonke inani lamanani eenkcukacha.
Imisebenzi yoLwazi lweMisa
Singazibuza ukuba yeyiphi ingongoma ekuchazeni i-histogram yesiqhelo. Isicelo esisodwa esibalulekileyo sichaphazelekayo ngokungafaniyo apho iibhagi zethu zibubanzi obukhulu kwaye zijoliswe kwi-integer. Kule meko singachaza ukusebenza kakuhle kunye nezindinganiso ezihambelana neendawo eziphambili zemivalo kwi-histogram yesiqingatha.
Olu hlobo lomsebenzi lubizwa ngokuba ngumsebenzi wesininzi. Isizathu sokwakha umsebenzi ngale ndlela kukuba i-curve echazwe ngumsebenzi unxibelelwano oluchanekileyo kunokwenzeka. Ummandla ongaphantsi kwekhava ukusuka kwixabiso ukuya ku- b kukungenzeka ukuba ukuguquguquka okungahleliweyo kunenani elivela kwi- b .
Ukuqhagamshelana phakathi kwamathuba kunye nommandla phantsi kwekhava yinto ebonisa ngokuphindaphindiweyo kwimanani yamathematika. Ukusebenzisa umsebenzi wokumisela ubunzima ukubonisa imodeli yesiqhelo sesithlogram enye inxibelelwano enjalo.
Ukwahlukana phakathi koLuntu kunye neSampuli eziPhezulu
Indlela yokubala iSampuli yokuPhambuka okuMgangatho
Igalelo elijongene nalo
Iinqununu ezinhlanu ezisisiseko ze-Scuba Diving Regulator
Yintoni Ulwaphulo Lwezilwanyana?